Muuqaalka waa sharciga marka loo eego wax kasta oo ka soo baxa jiritaanka, waxay joogayaan waqti, ka dibna ka soo baxa jiritaanka, si ay u muuqato iyadoo loo eegayo jilibka.
Vol. 5 MAY, 1907. No. 2
MAYA dhimasho bilaa dhalasho, umulin bilaa dhimasho. Dhamaan dhalmada waxaa dhiman, dhimasho kasta waa dhalasho.
Dhalashada waxaa loola jeedaa isbedelka xaaladda; sidaas oo kale dhimasho. Si aad u dhalatay adduunkan, dhimashada caadiga ah waa inuu u dhinto adduunka oo uu ka yimaado; si uu u dhinto adduunkan waa in uu ku dhashay adduun kale.
Safarka socdaalka jiilalka badani waxa uu si isdabajoog ah u weydiiyay, "Halkee ayaan ka imid? Xaggee baan tagaynaa? "Jawaabta kaliya ee ay maqleen waxay ahaayeen codsigooda su'aalahooda.
Laga soo bilaabo maskaxda fekerka badanaa waxaa jira su'aalo kale oo lab ah, "Sidee baan u imid? Sidee ayaan u tagaa? "Tani waxay ku dareysaa qarsoodi ah qarsoodiga, sidaas darteed mawduucuna wuu ku fadhiyaa.
Intii aynu dhex marnay jaaniskayaga, kuwa maanka ku haya ama ka dhex muuqday labada dhinacba, waxay yiraahdaan mid baa xallin kara caqliga, kana jawaaba su'aalaha la xidhiidha mustaqbalkiisa oo la mid ah kii hore. Hadalkani waa mid aad u fudud in aynu dhageysanno oo aan u deyno iyaga oo aan fikir lahayn.
Way fiican tahay in aynaan xallin karin qarsoodiga. Si aad sidaas u yeelatid waxay burburin kartaa xayawaankeena inta aynaan ku noolaan nalalka. Hase yeeshee waxaa laga yaabaa inaan helno fikradda runta ah adigoo isticmaalaya isbarbardhig. Waxaa laga yaabaa inaan soo qabanno "Halkee ayaan tagnaa?" Adoo eegaya aragtida "Meel walba oo aan ku nimid?"
Ka dib markaad waydiiso su'aalaha mataanaha ah, "Whence and Where?" Iyo "Sidee baan u imid?" Iyo "Sidee ayaan u tagaa?" Waxaa soo baxaya su'aasha soo socota, "Yaan ahay?" Marka nafsaddu si kalsooni ah u waydiisan su'aashu, marnaba marnaba ma noqon doonto mid ku filan ilaa ay ka ogtahay. "Aniga! Aniga! Aniga! Yaan ahay? Maxaan halkan u ahay? Halkeen ka imid? Halkee ayaan tagaa? Sidee ayaan u imid? Sideen u tagaa? Si kastaba ha ahaatee waxaan u imid ama u dhex maraa meel, wakhti, ama ka sii weyn, wali, weligiis iyo had iyo jeer, aniga iyo aniga kaliya! "
Laga soo bilaabo markhaatiga iyo indha-indheynta, waa mid og yahay in uu dunida u yimid, ama ugu yaraan jidhkiisa, markuu dhashay, iyo inuu ka baxayo dunida muuqata dhimashada. Dhalashadu waa bogga hogaaminaya adduunka iyo gelitaanka nolosha adduunka. Dhimashadu waa caalamka.
Ereyada guud ee la aqbalo ee ereyga "dhalashada" waa irridda noolaanta, jidheed abaabulay adduunka. Ereyga guud ee la aqbalay ee ereyga "dhimasho" waa joojinta jiritaanka, jidheed ee abaabulay si ay iskudubaraan noloshooda una sii wadaan ururkooda.
Tani, aduunkeena, adduunkeena, jawigiisuna waa mowqifka walxaha daa'imka ah waa sida qulqulaha meel bannaan. Naftu way ka timaadaa weligeed, laakiin waxay lumisay baalasheeda iyo xasuusta markay soo dhex socoto jawiga cufan ee dhulka. Dhulka oo dhan, waxay illoobaan gurigooda runta ah, oo ay dhejiyeen dharkiisa iyo jidhka jidhkooda, mana awoodo in ay arkaan meel ka baxsan labada dhinac ee halkan iyo halkan. Sida shimbir oo baalashiisu ay jajab yihiin, ma awoodaan inay kor u qaadaan oo ay koraan koontadiisa; oo sidaas daraaddeed nafsaddan way in yar socotaa, oo waxay u xidhxidheen xadhig qiyaaseed, oo wakhtigeedii qummanaa ayay ka welweleen weligood.
Dunida muuqata waxay udhaxeysaa laba daa'in sida tiyaatarka weyn ee daa'in. Waxyaabaha aan qarsooneyn iyo kuwa aan la arki karin waxay noqonayaan kuwo muuqda oo muuqda, oo aan la fahmi karin oo aan qaabsami lahayn oo ay ku qaadato foomka la taaban karo, iyo Qaadka aan halkan u muuqanayno inuu yahay mid ciriiri ah marka uu galo ciyaarta ciyaarta.
Ilmuhu wuxuu yahay hoolka halkaasoo nafta qof kastaa naftiisana uu ku iibsanayo dharka qaybtiisa ka dibna wuxuu bilaabi doonaa ciyaarta. Naftu way illowday wakhtigii hore. Jinka, rinjiga, dharka, muraayadaha iyo cayaarta ayaa sabab u ah in ay iloobaan in ay ahaadaan daa'in, waana la qoorsheynayaa daacadnimada ciyaarta. Qaybteeda, nafta ayaa ka lumisa dharkeeda hal mid oo hal marna mar kale ku soo celiyay dooxada iyada oo loo marayo albaabka geerida. Naftu waxay huwato dhiiggeedii ololkeeda; Qaybteeda oo dhan, waxay ka saartaa dharkaan inay ka tagaan adduunka. Nolosha uurka ka hor waa habka qiimaha, dhalmada ayaa ah tallaabo ka soo baxaya heer caalami ah. Nidaamka dhimashadu waa kharribidda iyo dib ugu soo noqoshada adduunyada rabitaanka, fikirka ama aqoonta (♍︎-♏︎, ♌︎-♐︎, ♋︎-♑︎) kaas oo aynu ka nimid.
Si loo ogaado habka loo yaqaan 'unmasking', waa in aan ogaano habka loo yaqaan 'balssning'. Si aad u ogaatid isbedelka inta lagu gudajirayo adduunka, waa in aan ogaanno isbedelka inta uu ku imaanayo adduunka. Si aad u ogaatid habka maasjireynta ama adigoo ku dhajinaya kharashka jidhka jirka, waa inuu ogaadaa mid ka mid ah physiology iyo fiisooloji ah horumarinta uurjiifka.
Laga soo bilaabo wakhtiga koontada ilaa dhalashada adduunka jireed dib u soo noqoshada ego waxay ka walwalsan tahay diyaarinta dharkeeda, iyo dhisitaanka jirkeeda jirka ah oo ay tahay inay degto. Inta lagu jiro waqtigan ego ma ahan mid aan dhicin, laakiin waxay la xiriirtaa hooyada iyada oo la adeegsanayo dareenka iyo dareemayaasha, ama si qoto dheer u maamula diyaarinta iyo dhisidda jirkeeda ama ay ku jirto xaalad riyo ah. Xaaladahan waxaa go'aaminaya horumarka hore ee maskaxda sida awoodaha iyo kartida.
Naf kastaa wuxuu ku noolyahay adduun gaar ah oo naftiisa u gaar ah, iyo wax u gaar ah, taas oo ay la xidhiidho ama u sheegto nafteeda. Naftu waxay dhisaysaa jidh jireed gudaha iyo hareeraheeda qayb ka mid ah laf ahaantaada iyo waayo-aragnimada dunida jireed. Marka qaxoontigu uu dhamaado waxa uu ku faafaa jirka jidhka iyada oo loo marayo habka loo yaqaan dhimashada iyo jabitaanka. Inta lagu guda jiro iyo ka dib kaddib dhimashada waxay diyaarinaysaa meydad kale oo ku dhex nool dunida oo dhan oo aan muuqan tan adduunkeena jir ahaaneed. Laakiin haddii ay tahay muuqaal muuqaal jidheed ama duni aan la arki karin, dib u soo noqoshada ego marnaba ka baxsan caalamkeeda ama ficil ahaanba.
Ka dib markii noloshu dhamaatay, ego wuxuu keenaa jirka jirka in la kala diro, la isticmaalo, loona xalliyo ilaha dabiiciga ah ee jirka, kiimikada, dabka, iyo wax jir ahaan aan waxba haysan jirka marka laga reebo jeermiska. Jeermigan waxaa lagu arki karaa indhaha jirku, laakiin wuxuu ku jiraa adduunka oo dhan. Muujinta jidhka jirka, jeermiskaasi wuxuu u muuqdaa mid ciriiri ah, gubasho dhuxul ah inta lagu jiro habka geerida iyo burburinta jidhka jirka. Laakiin marka walxaha jidhka la xalinayo ilaha dabiiciga ah iyo reincarnating ego ayaa u gudbay xilligeeda nasashada inta uu jeermisku joojinayo gubista iyo dhalaalaya; waxay si tartiib tartiib ah u yareysaa ilaa inta ay ugu dambeyntii u muuqato inay ahaato mid cufan oo guban oo midab leh. Waxay sii socotaa muraayad caan ah oo ah qayb qarsoon oo ka mid ah adduunka oo dhan inta lagu jiro xilliga firaaqada oo dhan. Waqtiga nasashada waxaa loo yaqaanaa diimaha kala duwan sida "Jannada." Marka muddadii cirku ay dhammaato oo ay ego ay isku diyaarinayso in ay dib udhigto, cirifka gubashada, sida jeermiga nolasha jireed, wuxuu bilaabaa inuu mar kale iftiimiyo. Waxay sii socotaa iftiin iyo noqotaa mid aad u iftiimaya marka la keeno xiriirka maadiga ah ee lala galo waalidiinta mustaqbalka ee sharciga jirdhiska.
Marka wakhtigu u bislaado jeermiska jidhka si uu u bilaabo koritaanka jidhka jirka wuxuu galayaa xiriir dhow oo lala yeesho waalidkiisa mustaqbalka.
Marxaladaha hore ee aadanaha, ilaahyada waxay ku socdeen dhulka rag, ragna waxay ku taliyeen xigmadii ilaahyada. Waqtigaas bani'aadamnimada ayaa koontoroola xilliyada qaarkood iyo ujeedada dhalashada. Waqtigaas waxaa jiray xiriir isdaba joog ah oo u dhexeeya ego oo diyaar u ah inuu ku dhaco jiritaanka iyo maskaxda kuwaas oo ah inay bixiyaan jirka jirka. Markay ego diyaar u ahayd oo ay diyaar u tahay in ay soo jiidato waxaa la ogeysiiyey diyaargarowgeedii iyagoo waydiisanaya kuwa noocaas ah iyo amarkooda kuwaas oo ku noolaa adduunka jir ahaaneed si ay u diyaariyaan jir jidheed kuwaas oo laga yaabo in ay jiri karto. Dhiirigelinta ragga iyo dumarkaba markaa waxaa la bilaabay koorso diyaarin iyo horumar oo soconayey illaa dhalashada jirka. Diyaarinta waxay ka koobnayd tababarka qaarkood iyo xaflado diimeed oo taxane ah oo loo arkayay in ay yihiin kuwo adag oo xurmo leh. Waxay ogaadeen in ay ku saabsanayeen in ay dib u bilaabaan taariikhda abuurista iyo in ay naftoodu ahaayeen inay u dhaqmaan ilaahyo ku sugan joogitaanka joogtada ah ee caalamka oo dhan. Ka dib markii nadiifinta lagama maarmaanka ah iyo tababarka jirka iyo maskaxda iyo waqtiga iyo xilliga gaar ah oo loogu talagalay oo lagu muujiyay maskaxda si ay u soo jiidato, qadarka xurmaysan ee midnimada qaran ee kakooban ayaa la sameeyey. Ka dibna neefta qofba mid baa midoobi jirtay, hal neefsi oo kale ah, oo abuuray jawi ku dhow labada isqabta. Intii lagu guda jiray midowga ururinta isku dhafka ah jeermiska dhalaalaya jirka jirka ah ee mustaqbalka ayaa ka soo jeeda beertii naftu ka soo baxday oo waxay soo gashay neefta labadaba. Germigii wuxuu u egyahay sida iftiiminta meydka labadaba wuxuuna sababay inay ku raaxaystaan ​​maaddaama ay qaadatay aragti ka mid ah qayb kasta oo jidhka ka mid ah, ka dibna wuxuu isu taagay uurkii haweenaydii kadibna wuxuu noqday curaarta taasoo keentay laba jeermis oo jinsi ah mid ka mid ah-ugxumada ciriiriga ah. Kadibna waxa uu bilaabay dhismaha jidhka kaas oo noqon lahaa aduunka jir ahaaneed ee maskaxda.
Tani waxay ahayd habka ay xigmadu u xukuntay bani-aadmiga. Ka dib dhalashada ilmaha waxaa ka qaybgalay xanuun aan foosha lahayn, iyo dareenka aduunka ee dunidu way ogtahay kuwa soo galaya. Mana aha sidaas hadda.
Dareemida, diinta, jinsiga, jaahwareerka, carqaladaynta, waa hogaamiyaasha nimanka ragga ah ee hadda rabta inay galmoodaan iyaga oo aan u malaynayn inay yihiin kuwa khaldan ee dunidoo dhan ku yimaada iyaga oo adeegsanaya dhaqankooda. Saaxiibada lama huraanka ah ee ficilladani waa munaaqasho, khiyaano, khiyaamo, been abuur iyo khiyaano. Dhammaantood waa sababta keentay dhibaatada adduunka, jirrooyinka, cudurada, maskaxda, saboolnimada, jaahilnimada, dhibaatada, cabsida, xaasidnimada, xaasidnimo, xaasidnimo, caajisnimo, caajisnimo, liidid, daciifnimo, daciifnimo, shaki la'aan, caajisnimo, murugo, welwel, rajo iyo dhimasho. Oo maaha oo kaliya haweenka jinsiyaddeena waxay u xanuunsadaan dhalashada, labadaba labadaba waxay ku xiran yihiin cudurada iscaawinta ah, hase yeeshee, mowqifyada soo socota, dembiyada isla dembiyada, waxay ku adkeeyaan dhibaatada weyn inta lagu jiro nolosha dhalashada iyo dhalashada. (Eeg Qoraal, Word The, Vol. 5, No. 1, p.97.)
Jeermiska aan la arki karin ee adduunka ka yimaada waa fikirka iyo naqshadaynta muuqaalka sida waafaqsan jirka jirka ah la dhisay. Jeermiska naaska iyo jeermiga haweenku waa firfircooni iyo firfircooni dabiiciga ah kaas oo ku dhisma qaabka qaabeynta jeermiska aan la arki karin.
Marka jeermiska aan la arki karin uu ka yimaado meesha uu ku nool yahay nafta oo uu soo dhex maro ololka neefta ee labada united isla markaana qaadana meeshii ilmo-galeenka wuxuu isku midoobayaa labada jeermis ee labada nin, iyo dabiicigu wuxuu bilaabaa hawsheeda abuurista .
Laakiin jeermiska aan la arki karin, inkasta oo uu ka soo baxo meeshii dunida oo dhan, aan laga jarin dunida nafta. Marka laga tago adduunka oo dhan, jeermiska aan la arki karin ayaa ka baxaya raad. Raaxadani waa mid cajiib leh ama mid ka mid ah lakin, sida waafaqsan dabeecadda qofka jiri doona. Raadinta wuxuu noqonayaa xuddunta kaas oo isku xira jeermiska aan la arki karin ee adduunka. Xadhigga oo ku xiran jeermiska aan la arki karin ee nafta waalidkiisa wuxuu ka kooban yahay afar dariiqo saddexda shilin. Wadajir ahaan waxay u muuqdaan inay yihiin hal xadhig; oo midabkoodu uu kala duwan yahay, wuxuu u dhexeeyaa cufan, culus oo culus oo leh rinjiga dhalaalaya oo dahab ah, oo muujinaya nadiifinta jidhka ee habka samaynta.
Xadhigaani wuxuu bixiyaa wadiiqooyinka iyada oo loo marayo uurjiifka oo dhanba awoodda iyo dabeecadahiisa dabiiciga ah, maaddaama ay ku jiraan jidhka oo ku sii jiraya abuurka (skandas) si ay u barbar dhigaan oo u midoobaan maaddaama jirka uu ku dhaco nolosha, iyo xaaladaha ayaa loo soo bandhigay muujinta tilmaanahan.
Afarta qaybood ee xuddunta ku jira waa jumlado kuwaas oo ka gudbaya arinta guud, arimaha cimriga, xaaladda noloshooda, iyo arimaha rabitaanka, in lagu sameeyo meydka caloosha. Saddexda shilin ee ku wareegsan afarta dhinac ayaa la isugu gudbiyaa arimaha sare ee jidhka, kuwaas oo ah nuxurka lafaha, dareemayaasha iyo qanjidhada (manas), dhuuxa (buddhi), iyo mabda'a ceymiska (atma). Afarta dhinacyada ayaa soo gudbiya arrinta, kaas oo ah astaamaha maqaarka, timaha iyo ciddiyaha (sthula sharira), unugyada jirka (linga sharira), dhiig (prana) iyo dufan (wan).
Maaddaama arrintani ay tahay mid deg deg ah oo soo baxaysa waxaa jira hooyada oo dareemaya dareemo iyo dareemo gaar ah, tusaale ahaan, sida rabitaanka cuntooyinka qaarkood, dareemo lama filaan ah iyo rabshado, dabeecado qallafsan iyo daal, dareen maskaxeed oo diineed, farshaxan, iyo midabka geesiga ah. Qayb kasta oo noocaas ah waxay u muuqataa sida saamaynta ego la isugu gudbiyo oo u shaqeyneysa jirka uurjiifka iyada oo loo marayo waalid jidheed-hooyadeed.
Waqtiga qadiimiga ah ee aabuhu wuxuu ka ciyaaray qaybta ugu muhiimsan horumarka ilmaha caloosha ku jira waxayna isku ilaalinayaan si taxadar leh hawshaan sidan hooyadii. Waqtiyadayada xumaanta xiriirka aabaha ee uur-jiifku waa la iska indho-tiraa oo aan la aqoon. Kaliya dareen dabiiciga ah, laakiin jaahilnimada, hadda wuxuu u dhaqmi karaa si wanaagsan oo ku saabsan dabeecada ba'an ee haweenka ee horumarinta uur-jiifka.
Qoraallada runta ah iyo cosmogoniyadu waxa ay sharaxayaan dhismaha jirdhiska jirka ee horumarkiisa si tartiib ah. Sidaa darteed, Bilowgii, dhismaha adduunka ee lix maalmood ayaa sharaxaad ka bixinaya horumarka ilmaha caloosha, oo maalinta toddobaad ee Rabbiga, Elohim, kuwa wax dhisa, waxay ku nasanayaan shaqadooda, sida shaqada loo dhammeeyey iyo nin ayaa lagu sameeyay muuqaalkii uu abuuray; taas oo ah, qayb kasta oo ka mid ah jidhka dadku waxa uu leeyahay awood ku habboon iyo midda dabiiciga ah, taas oo ah jidhka Ilaah, iyo jiritaanka ka qayb qaadashada dhismaha jidhka waxay ku xidhan yihiin qaybta ay dhisay iyo waa in ay ka jawaabaan dabeecadda hawlaha qaybtaas lagu amray in lagu dhejiyo maskaxda si ay u qabato.
Qayb kasta oo jidhka ah waa taliyaal soo jiidanaya ama ilaalinaya awoodda dabiiciga ah. Maadaama uu taliyuhu isticmaalo awoodaha ayaa ka jawaabi doona. Nin runtii waa microcosm oo laga yaabo inuu ugu yeero macrocosm sida uu aqoonta ama iimaanka, image image iyo doonista.
Marka uurjiifku dhammeysto waa waxa kaliya ee dhismaha jir ahaaneed ee qaybta todoba jeer ah ee la sameeyay. Tani waa kaliya dunida ugu hooseeya ee nafta. Laakiin ego weli ma dhicin.
Uurjiifka, oo la naqshadeeyey oo nasteen, wuxuu ka tagaa adduunka jirkiisa mugdiga ah, uurka, oo u dhinto. Dhimashadan uur-jiifka ahi waa dhalashadeeda adduunka oo dhan iftiinka. Neef, qallayl iyo qaylo, iyo neefta oo ay u egtahay ego wuxuu bilaabmaa in uu uuraysto oo uu ku dhalan karo oo uu ku dhufto qaybta maskaxda ee waalidkiisa. Tusaale ahaan, sidoo kale, wuxuu u dhimanayaa adduunkiisa, wuxuuna ku dhashay kuna dhuftay adduunka jidhka.